Rohingya Students Forum: October 2016
Bállukkia ar Sool ór Só 1/ ဝံပုလွေနှင့် သိုးကလေး (၁)
Bállukkia ar Sool ór Só. 1
Ek din Bállukkia uggúa yé zág sirá ói foñt áraiyé dé Sool ór só uggúa ré loot faiyé. Bállukkia yé íbaré hái bálla dile dile fáiséla gorí feille, kintu háité sóyi ó fan honó ekkán súta kobul gorai háile bála oibó búli kíyal goijjé. Bálukkia hoilo, 'O gura meah, goto bosór tui aññáré bicí hoile bicí beízzotti goijjós'. 'Asole' Sool ór só yé hañdar abas loi hoóddé, 'Aññí dé yá nó ói óddo.' Baáde Bálukkia hoiló, 'Tui aññár kiíl háiyos'. 'Noó' oo mor ustat, hoí Sool ór só yé guzori juwab diyé,' aññí ajó keér oddó hái nófarí'. Abar Bálukkia yé hoodé, 'Tui aññár kuwattú faní háiyos.' Sool ór só yé juwab dedde 'Aññí honó otté faní no haí, bólke mor maa r dud deki mollá faní yó hána yo.' Ehón Sool ór só ré dóri feillé baáde har curú.Tík asé, mor hár elzam ekkán ekkán oré Juwab dilé yó, aññí honó biyalor hána no hái tái nofaijjúm hoí hái feillé.
Zalemetar zulúm ór súta ekkán hámicá tuai fai bou.
Wolf, meeting withalamb astray from the fold, resolved not to lay violent hands on him, but to find some plea to justify to the lamb the Wolf's right to eat him. He thus addressed him: "Sirrah, last year you grossly insulted me." "Indeed" bleated the lamb inamournful tune of voice, "I was not then born." Then said the Wolf, "You feed in my pasture." "No, good sir," replied the Lamb, " I have not yet tasted grass." Again said the Wolf, " You drink of my well." "No", exclaimed the the Lamb, "I never yet drank water, for as yet my mother's milk is both food and drink to me." Upon which the Wolf seized him and ate him up, saying, "Well! I won't remain supperless, even though you refute every one of my imputations."
Posted by Rohang king at 10:00 PM
Lekóya: Nay Puu Pyinn
Yaqub Poikambor (als) ór súryáni nam accíldé “Isárail". Issuá ar Isárail Joñikka fua duiní zonot mazé Issuá deki doñr ar Isarail deki cóñro bai accíl. Arobi bácat foormurí ré Aqib hoí dake. Isarail deki Issuá fisóttú oiyé dé étolla arobi ollé Isárail oré Yaqub hoí dakitó. Quraan Córifót Yaqub ar Isarail nam duniyán lootfaza.
Yaqub Poikambor (als) deki Ishaáq Poikambor (als) ór fua, Ibrahím Poikambor (als) ór nati accíl. Yaqub Poikambor (als) deki gaguttara doñr ar bicí cúndor accíl.
Baf Ishaaq Poikambor (als) ar dada Ibrahim Poikambor (als) tará hayáté táite AllaheYaaqub Poikambor oré nobi hísáfe zimma dari atá fórmaiyé.
Yakub Poikambor (als) or górgiristí
Yaqub Poikamborenizor guictí sañsa to boin Laiñya loi Neká goijjé. Laiñya ttú fua (6) wá foida oi oré wafat oi giyoi. Laiñya entehal ounór baade Yaqub PoikamboreLaiñya r cóñro boin Rahiil oré neká goijjé. Dusára bibi Rahiil ottú Yusúf ar Binyamin hoi fua dui wá oiyé. É bibi duiní zónor mazé bañdi Zulfá tú yó fua sair guá oiyé.
Fuwainór listí nisottún zahér gorá zar.
(Foilar bibi Laiñya r fuwain)
(Bibi Zulfár fuwain)
(Bibi Rahiil or fuwain)
Muth gorí hoilé Yaqub Poikambor (als) ottú fuwa 12 wá accíl. Ebbe doñr gua Yohuudá ar ebbé cóñro gua Binyamin.
Yaqub Poikambor (als) [boni Isárail ar Yohuudi]
Yaqub Poikambor (als) or súryani nam Isárail dé yán cúruttú huwa giyé. Éttollá Yaqub Poikambor (als) ór nati futi guictíré “Boni Isárail" hoí daké. Boni Isárail lobzó ibá Quraan córif ór zaga zaga ar “Suurá Boni Isárail" hoí suura uggúa yó asé. Yaaqub poikambor or bor fut “Yahuuda"r fózzontó guictí ré "Yohudí" hoí dake. Étolla hókkol Yohudi Boni Isárail ór fózzontó, kintu hókkol Boni Isárail Yohuudí Boni Isárail nóo.
Islámór Tarikin okkol ór hotá mozin Yaqub Poikambor (als) r guictít mazé Rosuul ar Nobi (64000) zón bízzé.
Yaqub Poikambor or Ador ar Sug
Yaqub Poikambor or fuwa barówar(12) bútóttun Poikambor Yusúf oré bicí ador goittó. Yaqub Poikamborenizor fuwa Yusúf óré hámicá nizor fuwáñti rakító. Fuwa Yusúf Poikambor (als) áñzi zonor mazé Yaqub Poikambor bicí ocánti oiyé. Buot zobaná fán tará baf fut dui zon síra accíl. Yaqub Poikamborefuwa Yusúf ólla hañdat mazé októ haraitó.
E ofúrani hañdanir zoriya baf or sugór zuti giyé goi. Ek dinná aáñzi giyoi dé fuwa Yusúf Poikambor (als) ór bazuloi sugór ottún fusí loiyé mótton sugór zuti fíri accé.
Yaqub Poikambor or wafát
Yaqub Poikambor (als)eáñzi giyoi dé fuwa Yusúf oré Misírot loot fai7bosór baadé (147) bosór boiccót wafát oi Allahr hañsé mulot oiyé goi.
Fuwa Yusúf PoikamboreBaf zan Yaqub Poikambor oré dada Ibrahím (als) ór hobor or hañsé dofón goijjé.
Yaqub Poikambor (als)or hotá Yusúf Poikambor or Kissát ó becá bicí loot fa zaibou.
Nay Puu Pyinn
Labels: books, literature, Rohingyalish
Uu Téñ: Zati Sólluk ór tin lombór ór segétirí (ဦးသန့်)
Hayat : 1909-1974 （65 bosór）
Nagira: Erawadi, Péñthanów.
Entehal: New York.
Hobor: Cwedagon Zadi r hañsé, Kandawmin Garden Mausoleam.
Furuickar: Jawaharlal Nehru Award for International Understanding, 1965 cón.
Uu Téñ oré Erawaddi ( ဧရာဝတီတိုင်း ), Péñthanów ( ပန်းတနော် ) Coór ot baf Uu Phonít ( ဦးဖိုးနှစ် ) ar maá Nan Touñg (ဒေါ်နန်းသောင် )e1909 cón fébruary 22 taaríq ká zonom diyé. Baf or guictí Arakan raijjo, Akyab coórór Rohingya musúlman accíl. Péñthanów nagíhara dé éttolla fisé íbaré “ Péñthanów Uu Téñ " boli dakí tó. U Téiñ ór bab maa deki soil códor, ar bafeRengun ót mazé Turíyá Hóbori habos( သူရိယသတင်းစာ ) oré nealail. Bormár Researc goróyar Jomat ( မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်း ) oré yó bondi gorí baiccót sáñti accíl. Baf moreddé ottót Uu Téñ cúde14 bosójjá accíl. Mirasí mamala lar maá ye4guá fua loi hamani hát bari accíl.
U Téiñ gura hale Péñthanów Hai Eskul ót fonná forí, Rengun Kolej ( တက္ကသိုလ် ) ót Taarik fón (်သမိုင်းဘာသာရပ် ) loi fonná foijjíl.
Uu Téñ ór Rengun Kolej ot forónor zobanar fotu, 1927.
É Pénthanów eskulot maicthorí gorá cúru gorí 25 bosórót é eskulot Heat Maictór boinníl.
E ottót Ma U Biñg ( မအူပင်မြို့ ) coórót tákedé Fónná montiri ( ပညာအုပ် ) Uu Nu (Bormár Uzir-e- Azom) r loi hatíl accíl. Uu Téñ é Ingilíc ar Bormís lói sábadé “Genda Lowká" ( ဂန္တလောက ) Mégezin torzumar zibbat ( ဘာသာပြန် ပြိုင်ပွဲ) ót sair bar fojjonto ek lombór fail. Íbar foilar cúrur leká deki Ingilíc ot leikké. 15 bosór boic ót sábail. Mróprá Puñg Briñg ( မြိုပြပုံပြင်များ), Naiñg Ngañ Bon Cuok Atóñg Gri Kyon Túñg Sa uok ( နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးကျောင်းသုံးစာအုပ်), Boma Tít né Piññya Tít ( ဗမာသစ်နှင့်ပညာသစ်), Predawta Kerí (Tin zidó) [ပြည်တော်သာခရီး (၃အုပ်တွဲ)]e.e kitaab ókkol có Elmi, Insániyot ór Soñba okkól oré Tila wá, Moñg Téñ, U Téñ e.e holomi nam (ကလောင်အမည် ) di leikké. Fonná elóm ( စာပေ ) or tosksra lekí baiccót ó tar mana ol oré sáf sáf gorí lekí tó, ar tar báfa ol ó hál hí zomana loi milhái tó.
Fonná forédé Zati torki oi, Torki óde zati fonná foré.
[ Uu Téñ ]
Bormá azaad faibar hañsé háñsé Uu Nu zehón UzireAzom óilo, Uu Téñ oré Rengun daki aní 1948 cón ot Redio Morkoz or Darikthar banai diyé. Yár baáde 1953 cón ót bormár hóbor ar Elani doftór (်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန ) ót Kebínét Uzir ( အတွင်းဝန် ) boinníl. 1951 tú 1957 cón foijjonto Uzireazom or Ségetirí hísafé sori gorí, Uu Nu lla Boyan (မိန့်ခွန်း) lekon, Bidecór sófor ol nal gorí don, bidecí gorba ókkol lói muulot oun e.e. ham ókkol gorí Uu Nu r biccaic hásel gorí faijjé.
Uu Téñ ar Tai Badcá Bhoumibol Adulyadej.
Uu Téñ ar Uzir-e-Azom Bormá Uu Nu.
Dec bidec ór Mocúwara ókkol becá bicít urí 1955 cón ot Indunícár Bandouñg coór ót goijjíl dé “fat no thanón hórkot"(ဘက်မလိုက်လှုပ်ရှားမှု ) oré cúru gorídí Foilar bar ór Ecía-afríka r dec ókkolór mujilís ór segétiri boinníl. Hámicá soyi uoré gorí soyí ladde oilé fissá no zai goittó dé Uu Téñ ar decór nomayinda Uu Nu lói unbon cúru oiyé loti 1957 cón ót mazé Zati Sólluk ( ကုလသမဂ္ဂ ) ór Bormár decór hóbor gua hisáfé zimmádi New York ót diferai diyé. 1957 cón óttú 1961 fán bormár dayemi embási oi baáde yó Zati Sólluk ór Dusára Ségetiri Dag Hammarkjold hábar Jáñs docá oi moronor dara toitta Zati Sólluk ór Ségetiri hísafé zimmádari ada goijjíl. 1960 cón ót mazé Uu Téñ oré “Pyethoungzú Situ Tingáhá Pyandhéñg"( ပြည်ထောင်စုစည်သူ သင်္ဂဟပြန်တမ်း ) mozin “Maha turá situ Bue”( မဟာသူရစည်ဘွဲ့ ) loi fózí tobka ( ဗိုလ်ရာထူး ) loi cómman diyé. U u Téñ dekí Zati Sólluk ór Ségetirír tobkaré Ecíar dec okkólor bútottún foilár cúrut faildé uggúa hásti.
1961 cón Novambor ór3taarik ottùn cúru gorí Ségetirí Dag Hammarkjold ór nó furadé cómo ré toittá Ségetirí hísafe zimma diyé. 1962 cón Disembor 30 taarik ottú loti 1966 cón Novembor3taarik fán Ségetirí hísafé accíl.
Íbar Ségetirí foilar miyad ót Cubár Misail góthoná (Cuba missile Crisis ) ré mila mincá gorídí Kuangor Decór Larair fózzat oré nifáidi faijjíl. Yánór zoriyá Duniyaiyé íbaré cómman goijjíl.
Uu Téñ ór Foribar
1966 cón Desembor2taaríkkiá Héfazoti Kounsil( လုံခြံရေးကောင်စီ )ór ek mot vút loi Dusára miyad Zati Sólluk or Ségetiri hísafé 1970 cón Disemborór 30 taarik fán goijjíl. Íbar dusára miyat ót boot ham goijjíl. Hasgorí Zati Sólluk ót Ecía ar Afrikar becá bicí dec ol goli fari bar maamala, doin afrikar hala rañga forokkí muhálef maamala, 1962 cón ot Yemon or maamala, 1967 cón ot Arob- Isarail sou dinná larai, 1968 ot baharin or fójjat, Prag hudiinna Hórkot (Prague Spring), Ceko Solovikía ré Sovietecíma tela hámla ( ဆိုဗီယက်ကျူးကျော် ), Víyetnam ór larai, 1971cón ót Bangladec azaadillá India- Pakistán larai iín ór cánti ofán bonai difaijjé. 1962 cón ot mazé Amerika Soviyat Nizam Larair ottót duní badcá mazé U Téñe“Tesára noiya báca” estemal gorí bonai diyédé etolla soviyatemisail ór Gáñthi tulí loi gillgoi ar Amirika yó Cubá ré bondí okkol abar kúli diyé.
E maamala beggun ot mazé cánti nuksan oibar hótara ar lairár emkan accíl. Kintu U Téñ ór aholbon or sáñte mazottú bonai diyédé étollá laraittún ári faijjé. Oxfort colleje20 códír mocúr manuic zomagorí leikké dé “ Who's Who in the 20th Century ” kitaab ot mazé U Téñ ór hotá lekí dec bidec ór fojjat okkol oré nizam ór sáñté milai difaijjil hoi cúruttú leka asé.
Uu Téñ é Osin Uran Jinís (Unidentify Flying Object- UFO) oré dil laiggíl. 1967 cón ót Amerika zati Phizik ór elómdar Dr. Jame E.Mc Donald ré UFO babote Zati Sólluk ot hotá hoi fare fán gorí diíl.
1971 cón January 23 ót mazé Uu Téñehonó wajáeTesára miyad ham gorí nofaríbo bulí sáf sáf juwab diyé. Héfazoti Kounsél é yó bout cápta fán zaga yánor kabel manuic tuwaiyé. Akhérottún, Kurt Waldhein oré basí zaga yánot diyé. U Téñetar miyad fúraibár 10 din agé kurt oré ham faldai diyé.
Uu Téñ oré fencén faibar fuñware fuñware New York Time hóbori habos 1971 cón Disembor 27 tarik ót “The Liberation of U Thant" súrhir tole becá bicí taarif goijjé. Souri goreddé ottót Uu Téñ é Palisade ar Douglas Avenuses rastat mazé, rastar lo. 232 ót 4.78 eká doñr Riverdale, Bronn barizat tákito.
1974 cón Novembor 25 tarik ót Féccúa kensar loi New York coór ót entehal oiyé.
Cwedagon Zadi r hañsé, Kandawmin Garden Mausoleam.
U Téñ é Daw Teiñg Tin loi biyá gorí fuwa uggúa ar zii uggúa oiyé. Fuwa wá baf hamot taité docá oi mara giyé. Nati4gúa, futi3nuá yó asé. Morot fuwa nati Uu Tén Myint( ဦးသန်းမြင့် ) deki ugguá Taarik Elómdar( သမိုင်းပညာရှင် ), Zati Sólluk ór Síyasí doftór( နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဌာန ) ot mazé ugguá tojurubati soijjá. “The River of Lost Foot Steps" kitab oré Uu Ten Myint é lekí sábaiyé.
Háwala : ဦးသန့်အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Posted by Rohang king at 6:07 AM
Labels: books, literature, Rohingyalish, well-known
စကားကြီး (၆)ခွန်း သို့မဟုတ် အရည်အချင်း၆ရပ်နဲ့အကျယ်ရှင်းပြချက်
သဗလိဂ် လမ်းစဉ် ထူထောင်သူ မော်လနာ အီလီယာစ် ရဟ်မသွလ္လာဟ်
ဆွဟာဗာဟ်သာဝကကြီးများဟာ ကိုယ်တော်မြတ်(စွ)ရဲ့ အနီးအပါးမှာနေပြီးတော့၊ မြောက်များစွာသော အရည်အချင်းများကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအရည်အချင်းများထဲမှအချို့သော အရည်အချင်းများကို လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီးန်သာသနာတစ်ခုလုံးပေါ်မှာ လွယ်လင့်တစ်ကူလျှောက်လှမ်းနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအရည်အချင်းများကို ခြေးဆွေဖာ့သ် (ခေါ်) အရည်အချင်း (၆) ရပ်လို့ခေါ်ပါတယ်။
(၁) ကလေမာဟ်သွိုင်ယိဗဟ် လားအီလားဟ အိလ်လလ္လား ဟု မိုဟမ္မဒွရ် ရစူလွလ်လ္လာဟ်။ (ကလေမဟ်ကို သက်သေခံချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်)
(၂) ဆွလာသ် (ခေါ်) နမာဇ်။ (ဆွလာသ်ဝတ်ပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်)
(၃) အီလင်မ် (သာသနာ့ပညာသင်ယူဆည်းပူးခြင်း)နှင့် ဇိကိရ် (အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်ကို အောက်မေ့တသသတိရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်)
(၄) အိက်ရားမ်မေ့ မွတ်စ်လင်မ်။ (မွတ်စ်လင်မ်အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်)
(၅) အိခ်လားစ်ဆွေ့နိယာဒ်။ (စိတ်စေတနာဖြူစင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်)
(၆) ဒါဝသ်သဗ်လိဂ်။ (အလ္လာဟ့်လမ်း ထွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်)
လားအိလားဟ အိလ်လ္လားဟု မိုဟမ္မဒွရ် ရစူလွလ္လာဟ်။
(ကလေမဟ်တော်ကို သက်သေ ခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်)
အဖန်အဆင်းခံနှင့် ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက် ကျွန်တော်တို့ နှလုံးသား ထဲရောက်ရှိဖို့။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(စွ)ဟာ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်ရဲ့ ရစူလ်တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်း။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(စွ)၏ နည်းစနစ်တွေမှာပဲ ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုရတယ် အခြားနည်းစနစ်တွေမှာ ရာနှုန်းပြည့်ဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်၊ ကျွန်တော်တို့ နှလုံးသားထဲကိုရောက်ရှိစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြင်သူဟာ ကလေမဟ်တော်ကို အိခ်လားစ်နဲ့တစ်ကြိမ် ဖတ်ခဲ့မယ်ဆိုလျှင်၊ အရင့်အရင် ကျူးလွန်မိခဲ့တဲ့ ဂိုနာဟ်တွေကို အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်က ခွင့်လွှတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တော်မြတ်(စွ)ရဲ့ စွန္နသ်တော် တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်မယ်ဆိုလျှင်၊ ရှဟီဒီပေါင်း(၁၀၀)ရဲ့ အကျိုးစဝါးဗ်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှဟီဒီတစ်ယောက်ရဲ့ အဆင့်အတန်းဟာဆိုလျှင် ထိုရှဟီဒ်ရဲ့သွေး ၊မြေမခခင်မှာပင်၊ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်က ဂျန္နသ်ကို ဝါဂျိဗ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဝသ်၊ ကလေမဟ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတင်ပြပြီး၊ ကလေမဟ်ဖက်သို့ ဒါဝသ်ပေး ဖိတ်ခေါ် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စွန္နသ်တော်တွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို တင်ပြပြီး၊ စွန္နသ်တော်ဖက်ကို ဒါဝသ်ပေးဖိတ်ခေါ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုတွေနှလုံးသားထဲ ရောက်ရှိလာဖို့အတွက်၊အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်ရဲ့ ကြီးကျယ်မှုတွေကို-
ကျွန်တော်မျိုးတို့အားကလေမဟ်ရဲ့ဟကီကသ် ကိုချီးမြှင့်ပေးသနားတော်မူပါ။ ကလေမဟ်ပေါ်မှာ လက်တွေ့လိုက်နာနိုင်စွမ်းချီးမြှင့်ပေးသနားတော်မူပါ။ ကျန်ရှိတဲ့သက်တမ်းမှာလဲ ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး(စွ)ရဲ့ စွန္နသ်တော်တွေကိုသိရှိပြီး၊ သက်တမ်းမွေးမြူနိုင်စွမ်းပေးသနားတော်မူပါ"ဟု ဒိုအာတောင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
●(၂) ဆွလာသ် (ခေါ်) နမာဇ်●
အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့မြောက်မြားစွာလာရှိပါတယ်။ အကြင်သူဟာ နမာဇ်(၅)ကြိမ်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲဖတ်ခဲ့မယ် ဆိုလျှင်၊ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်ကိုယ်တိုင် ဂျန္နသ်ကိုတာဝန်ယူပြီး၊ ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
နမာဇ်မဖတ်တဲ့သူကိုတော့ ဘာမှတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကာဖိရ်နှင့်မွတ်စလ်မာန်ခြားနားခြင်းဟာလည်း နမားဇ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဝသ်နမာဇ်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတင်ပြပြီး နမာဇ်ဖက်ကိုဒါဝသ်ပေးဖိတ်ခေါ်နေရမယ်။
နမားဇ်(၅)ကြိမ်ကို သပ်က်ဗီးရ်အူလာနှင့်တကွ သူ့အချိန်နှင့်သူ စွဲစွဲမြဲမြဲဖတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။
စွန္နသ်၊ ဝါဂျိဗ်၊ နဖိလ်များကိုလည်း ဖတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ မိမိသက်တမ်းမှာ လွတ်ခဲ့တဲ့ အွမ့်ရေကဇွာနမာဇ်များကိုလည်း လိုက်လံဖြည့်စွက်ပြီးဖတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ ညမှာ ရှည်လျားတဲ့ရကအသ်တွေနဲ့ နမာဇ်ကိုမရ်ှက် လုပ်နေရမှာဖြစ်တယ်။ အသက်ပါတဲ့ နမာဇ်ဖြစ်လာစေရန်အတွက် အချက်ကြီး(၅)ချက်ပေါ်မှာ လိုက်နာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်။ ၎င်းတို့မှာ-
ရူကွန်တိုင်းရူကွန်တိုင်းမှာ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ် နှင့်(၃)ကြိမ်အနည်းဆုံးဆက်သွယ်ခြင်း။
ကျွန်တော်မျိုးအားတမန်တော်မြတ်ကြီး(စွ)နှင့် ဆွဟာဗဟ်သာဝကကြီးများဖတ်ခဲ့တဲ့ အသက်ပါတဲ့ နမားဇ်မျိုး ဖတ်နိုင်တဲ့သောဝ်ဖစ်က် စွမ်းအားပေးသနားတော်မူပါ"ဟု ဖရာဇ်နမာဇ်ပြီးတိုင်း၊ပြီးတိုင်းမှာတောင်းခံနေရမှာ
●(၃) အီလင်မ်နှင့် ဇိကိရ်●
( သာ့သနာ့ပညာသင်ယူဆည်းပူးခြင်း နှင့် အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်အား တသ သတိရခြင်း)
အခြေအနေတိုင်းမှာ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်ရဲ့ အမိန့်ဘာတွေရှိလဲသိရှိခြင်း၊ လိုက်နာခြင်းဖြစ်တယ်။
အကြင်သူဟာ အီလင်မ်ပညာသင်ယူဆည်းဖူးဖို့၊ ခရီးထွက်ခဲ့မယ်ဆိုလျှင်၊ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်သခင်က
ဒါဝသ်အီလင်မ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတင်ပြပြီး၊ အီလင်မ်ဖက်သို့ ဒါဝသ်ပေးဖိတ်ခေါ်ရမယ်။
တစ်နေ့ကို(၂)ကြိမ် သာလင်မ်ဝိုင်းမှာ ပါဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖဇာအိလ်ကိုတော့ သာလင်မ်၏ ဟလ်ကာဝိုင်းတွေမှာ
မစာအိလ်ကိုတော့ စစ်မှန်တဲ့ အစ္စလာမ့်သာသနာ့ပညာရှင်များ၏ ထံပါးမှာ သင်ယူဆည်းပူးရမှာဖြစ်တယ်။
"အိုအလ္လာဟ်! ကျွန်တော်မျိုးအားအီလင်မ်၏ဟကီကသ်ချီးမြှင့်တော်မူပါ။ အမလ်ပေါ်မှာ ရပ်တည်နိုင်မည့်၊ တွန်းပို့နိုင်မည့်၊ဖြစ်စေနိုင်မည့်အီလင်မ်မျိုး ချီးမြှင့်တော်မှုပါ"ဟု ဒိုအာပြုရမှာဖြစ်တယ်။
ဒါဝသ်၊ ဇိကိရ်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို တင်ပြပြီး၊ ဇိကိရ်ဖက်သို့ဒါဝသ်ပေးဖိတ်ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်။
အာရုံနှင့်တကွစိတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ ကုရ်အာန်သေလာဝသ်ကိုလည်းအချိန်သတ်မှတ်ပြီး၊ နေ့စဉ်ဖတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ မတ်စ်နှုန်းဒိုအာကိုလည်း ကျက်မှတ်ပြီးသူ့နေရာနှင့်သူ ကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်မျိုးအား'ဂဖလာသ်'ဆိုတဲ့မေ့လျော့ခြင်းမှ ထိန်းသိမ်းပြီး၊ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်အားအမြဲတမ်းသတိရ၊ တသ၊သူအဖြစ်ထားရှိတော်မူပါ" ဟုဒိုအာပြုရမှာဖြစ်တယ်။
●(၄) အိက်ရားမ်မေ့ မွတ်စ်လင်မ်●
အီမာန်ရှိခြင်းကို အကြောင်းခံပြီး၊ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး၊ အိက်ရာမ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးကျေးဇူးမြောက်များစွာလာရှိပါတယ်။ အကြင်သူဟာ မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦးရဲ့အရှက်သိက္ခာကို
ဖုံးအုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလျှင်၊ကေယာမသ်နေ့မှာ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်ကလည်း၊မိမိရဲ့အရှက်သိက္ခာကို ဖုံးအုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဝသ်၊ အိက်ရားမ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို တင်ပြပြီး၊ အိက်ရားမ်ဖက်သို့ ဒါဝသ်ပေးဖိတ်ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးသူကို ရိုသေ၊ ငယ်သူကို သနား၊ အာလင်မ်သာသနာ့ပညာရှင်များကိုဂုဏ်ပေးလေးစားရမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ အိက်ရားမ်ရရှိဖို့အတွက် ခေသ်မသ်များများလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်မျိုးအားတမန်တော်မြတ်(စွ)နှင့်ဆွဟာဗဟ် သာဝကကြီးများထားခဲ့တဲ့ 'အခ်လားက်'မျိုးပေးသနားတော်မှုပါ" ဟုဒိုအာပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ရပ်တိုင်း လုပ်ရပ်တိုင်းဟာ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်အတွက် သက်သက်ဖြစ်ရပါမယ်။
အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့မြောက်များစွာလာရှိပါတယ်။ အိခ်လားစ်နဲ့လုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်တိုင်းမှာ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်က အင်အားထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဝသ်၊အစ်ခ်လာ့စ်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို တင်ပြပြီး၊ အစ်ခ်လာ့စ်ဖက်သို့ ဒါဝသ်ပေး ဖိတ်ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်တစ်ခုကို စတင်ပြီဆိုလျှင် 'ဗိစ်မစ်လ္လာဟ်'နဲ့ စတင်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ အလုပ်တစ်ခု လုပ်ခွင့်ရပြီဆိုလျှင် 'အလ်ဟမ်ဒုလစ်လ္လာဟ်' ဖတ်ပြီးအလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်ကို၊ ဦးစွာပထမကျေးဇူး တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားပြီဆိုလျှင် 'အိစ်သိဂ်ဖွာရ်'နဲ့ အဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အိခ်လားစ်ရရှိဖို့အတွက်ကိုအေဗာဒသ်များများလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်မျိုးအား၊ တမန်တော်မြတ်(စွ)နဲ့ဆွဟာဗဟ် သာဝကကြီးများထားခဲ့တဲ့ အိခ်လားစ်မျိုးချီးမြှင့်တော်မူပါ"
မိမိရဲ့ ဂျာန်(အသက်)၊ မလ်(ဥစ္စာပစ္စည်း)၊ ဝပ်က်သ်(အချိန်)ကို သက်တမ်းမှာမှန်ကန်စွာသုံးစွဲတဲ့နည်းစနစ်ကို အလ္လာဟ့်လမ်းတွေမှာထွက်ပြီးသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကြင်သူဟာ တစ်မနက်၊ တစ်ညနေ အလ္လာဟ့်လမ်းမှာ အချိန်ပေးခဲ့မယ်ဆိုလျှင်၊ ဒွန္နယာနဲ့ ဒွန္နယာအတွင်းမှာ ရှိတဲ့အရာအားလုံးထက် သာပိုကောင်းမြတ်တဲ့ အကျိုးစဝါးဗ်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဝသ်သဗ်လိဂ်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို တင်ပြပြီး၊ သဗ်လိဂ်ဖက်သို့ ဒါဝသ်ပေးဖိတ်ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အလ္လာဟ့်လမ်းတော်တွင် မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်ရမယ်။အရှေ့က အခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်း တိုက်တွန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ ဂျာန်၊ မာလ်၊ ဝါ့က်(သ်)ကို အလ္လာဟ့်လမ်းတော်မှာ အသုံးချခွင့်ပေးသနားတော်မူပါ"
ဒီအရည်အချင်း(၆)ရပ်ပေါ်မှာ လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုလျှင်၊ ဒီးန်သာသနာတစ်ခုလုံးပေါ်မှာ လွယ်လင့်တကူလျှောက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
"ရေ အတွက် ငါး မလိုပါ။ ငါး အတွက်တော့ ရေ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။"
"ဒီးန် အတွက် သင်မလိုပါ။ သင့်အတွက်တော့ ဒီးန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။"
ကျွန်တော်နှင့်တကွ ကမ္ဘာ့အွမ္မသ်ထုတစ်ရပ်လုံးကို၊ဟေဒါယာဒ်လမ်းမှန်တရား ချီးမြှင့်ပေးသနားတော်မူပါ။
ဒေါက်တာ ဇာကီရ်နိုက် နှင့် အမီရ် မော်လနာ တွာရိခ်ဂျော်မီလ်
Special Credit to Md. A Nas
Posted by Rohang king at 2:17 AM